Emva koko salumkisa nge-superstate ezayo. Ngoku isihloko esise-Aftonbladet sisiqinisekiso sokuba, kwiminyaka eli-18 kamva - kodwa kungcono ufike emva kwexesha kunangaphambili.
Ukuba ujonga nje ngokombono woluntu, ungabandakanyeka kwaye uvuye okwenzekayo, kodwa abo bakholelwa kumazwi esiprofetho seBhayibhile babona enye into. Kubaluleke kakhulu ukukholelwa kwilizwi lesiprofetho sikaThixo, ukungayikhathaleli kwaye ungaqali ukuthetha ngokuqikelela kunye nokutolika kwakamsinya nje emva kokuba kudluliselwe igama lesiprofetho. Oku kunokwenziwa kude kube lixesha laxa ikhethini liwile kwaye amehlo evuliwe.
Ulawulo olukhulu lwamandla kwindawo yoBukhosi beRoma yakudala
Esi sisiphumo sesigqibo esithathwe eBrussels. Yayilinyathelo elimbali kwaye elona lincinci inyathelo lesiprofetho ekuzalisekeni koko iziprofeto zilumkisileyo ziya kuza. (Isikrini esibonisa i-Aftonbladet kunye neVärlden Idag.)
Ngelixa abantu baseYurophu bekwiholide kumazwe amaninzi, isigqibo senziwe ngaphezulu kweentloko zabo ukuba abaninzi ababuqondi ubukhulu. KwanamaKristu angakhathaliyo kwilizwi lesiprofetho babengenalo nofifi.
Oko kubhengezwe kususela oko kwabhalwayo okokuqala kwiNcwadi yeSityhilelo kulumkisiwe ngobukumkani obunamandla obuninzi kumhlaba woBukhosi beRoma yakudala, sinayo ngoku-i-EU. Inokwenzeka ngexesha elixekileyo apho sikhoyo ngoku.
Ngelixa abaninzi bathetha nge-EU njengeprojekthi yoxolo, oku kuyenzeka. Ngentetho yokusebenzisana ukuze kubekho uxolo phakathi kwamazwe aseYurophu, ungazisa imikhosi kunye-wonke umntu ufuna uxolo. Kodwa umntu akanalo nofifi lokuba imveliso yokugqibela yesakhiwo samandla amakhulu iza kuthetha ntoni.
Ukuba ujonga nje ngokombono woluntu, ungabandakanyeka kwaye uvuye okwenzekayo, kodwa abo bakholelwa kumazwi esiprofetho seBhayibhile babona enye into.
Kubaluleke kakhulu ukukholelwa kwilizwi lesiprofetho sikaThixo, ukungayikhathaleli kwaye ungaqali ukuthetha ngokuqikelela kunye nokutolika kwakamsinya nje emva kokuba kudluliselwe igama lesiprofetho.
Oku kunokwenziwa kude kube lixesha laxa ikhethini liwile kwaye amehlo evuliwe. Ayizonjongo zethu ke ukuba siqonde ukuba kwenzeke ntoni-kufuneka sibe namehlo esiprofetho kwaye sibone ukuba kwenzeka ntoni ngoku.
Ukunqongophala okukhulu kwabaprofeti
Ukushokoxeka okukhulu kwabaprofeti kwilizwe lethu, "amatye angathetha." Ngoku uGöran Greider ukwenzile e-Aftonbladet nge-22 kaJulayi. Ubhala inqaku ngesihloko esithi: "Ngoku i-superstate iyakhiwa". Uyathetha malunga noku: “Ke ayindim lowo ungcangcazelayo. Ngumhlaba lowo. ”
Ubuye abhale athi: "Uninzi oluqinisekisa ukuzalwa kweli lizwe litsha le-EU bonwabile ukuba, umzekelo, ubuzwe baseSweden" babethwe "- kodwa bangaboni ukuba bona ngokwabo baziphatha nje njengabezelwe begazi elizeleyo, abathi ngequbuliso babhiyozele ukuzalwa kwesizwe esikhulu, i-United Nations United Amazwe.
Kubhalwa amanqaku amaninzi
Kwi-Figueor sibhale amanqaku amaninzi malunga nentuthuko eYurophu kwiminyaka yangaphambilini, malunga ne-50 yezi zinto zikwiphepha lethu ukuba ucinezela iqhosha le-EU. Apha ngezantsi lelinye lamanqaku esawabhala ngo-2002.
Vecka 25, fredag 25 juni 2021 kl. 08:10